Oceanfront မိုးမျှော်တိုက်ခန်း + ရေကူးကန် !! - ATLAS Tenerife®အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
ပင်မစာမျက်နှာOceanfront Penthouse + ရေကူးကန် !!
ရောင်းရန်: Tenerife, Puertito de Los Silos ရှိပထမဆုံးသမုဒ္ဒရာအတန်းရှိအံ့ဖွယ်ကောင်းသောပစ္စည်းများ။
အခန်းတိုင်းတွင်မျက်နှာကျက်များ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလှေခါးထစ်များနှင့်အခန်းတိုင်းတွင်ပြတင်းပေါက်များရှိသည်။ လူအခကြေးငွေနည်းပြီးရေကူးကန်၊ ဓာတ်လှေကားနှင့်ဘောလုံးကွင်းများပါ ၀ င်သောကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသောရှုပ်ထွေးသောအရာများဖြစ်သည်။ အိမ်ရှေ့တံခါးဝတွင်အခမဲ့ကားရပ်နားရန်နေရာ!
Puertito de Los Silos - မင်းရဲ့လှေကိုမီတာ ၅၀ အကွာမှာထားနိုင်တယ်။
ဆိပ်ကမ်းအတွင်းရှိသဲသောင်ပြင်အနည်းငယ် - မီတာ ၅၀ ။
ကမ်းခြေကြီးနှင့်သဘာဝရေကန်များ - မီတာ ၃၅၀ ။
စားသောက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဘားများ၊ ကလေးများအတွက်ကစားကွင်းနှင့်ကြီးမားသောစည်ပင်သာယာရေကူးကန် - အားလုံးသည်ရှုပ်ထွေးသောနေရာမှမီတာ ၃၅၀ အကွာတွင်ဖြစ်သည်။
တိုက်ခန်းပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်၎င်းကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။ နောက်ထပ်ယူရို ၇.၀၀၀ - ယူရို ၁၀.၀၀၀ ဖြင့်သင်၏အိပ်မက်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးသင့်အရသာအတွက်အလှဆင်ထားသောသင့်ရဲ့အိပ်မက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Penthouse တိုက်ခန်း၊ သမုဒ္ဒရာမှ 200 မီတာ! မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများ!